Edere site Tranquillus | Feb 29, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
A na-ejikarị okwu oge ezumike na-ezo aka na izu ise nke ụgwọ ezumike. Mana nke a abụghị oge niile, otu okwu ahụ pụtara ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'ime edemede ọhụrụ a na isiokwu, anyị ga-elekwasị anya na iri na otu ọhụrụ ụdị ezumike.
N'ime usoro ole na ole ndị a, anyị ga-anwa ime ka ị chọpụta ezumike nke nna, hapụ maka ụmụaka na-arịa ọrịa na ezumike nsogbu. Anyị nwere olile anya na ụzọ anyị ga - esi mee ka ị chọpụta ahịhịa ndị a na ụdị ha niile, na ihe a niile ga - abara gị uru.
AKW LEKWỌMAKA ANY AND NA ANDBARA Nwa
Na Frans, enyere ndị nne na nna ọzụzụ na nlekọta ụmụ ka edepụtara na ederede L1225-35, L1226-36 na D1225-8 nke Usoro ọrụ. Emere ya ndi oru nile, ndi ghuru nna, n’agbanyeghi oru aka ha, ndi okenye, udiri oru ndi diri ha. Ndị ọrụ aka onwe ha nwekwara ike iji ụdị ezumike a rụọ ọrụ. Ogologo oge ịhapụ nna na nwa na-elekọta dị iche iche, dabere na ọnụ ọgụgụ ọmụmụ ya. Ọ na-ewe ụbọchị iri na otu gụnyere ngwụcha izu mgbe a na-amụ otu nwa, ụbọchị iri na asatọ n'ihe banyere ọmụmụ ọtụtụ. Na mgbakwunye, enwere ike iwere ya mgbe ụbọchị izizi nke ụbọchị atọ nke ịmụ nwa.
Cannotbọchị 11/18 nke nna ị na-elekọta na nlekọta nwa enweghị ike ikewa ya.
Nkuchi ezumike bụ ezumike nke onye ọ bụla were n'ọrụ nwere ọrụ inye onye ọrụ ọ bụla nakweere otu ma ọ bụ karịa ụmụaka. Mgbe nkwekọrịta ọrụ anaghị ekpuchi mmezi ụgwọ ọnwa, onye ọrụ were ezumike a nwere ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ zutere ọnọdụ ndị a:
Edebanyela aha na usoro nchekwa ọha maka opekata mpe ọnwa iri
arụwo ọrụ ná nkezi maka awa 200 n'ime ọnwa 3 bu ụzọ kuchiri.
Oge nnabata ga-anọru:
Izu iri maka nwata nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ
Izu iri na asatọ mgbe ị na-achọ nwa nke atọ
Izu 22 mgbe ọ bụ nkuchi otutu ma ị nweela ụmụ gbara ọkpụrụkpụ.
Ọ na - ebido n’izu dị n’ihu n’ihu ikuchi nwatakịrị ahụ (ụmụaka) a na-ejikọ ya na ụbọchị atọ nke inye nwa ikike.
Enwere ike kewaa ezumike ahụ n'etiti nne na nna abụọ ahụ, nke ga-agbakwunye ụbọchị 11 ma ọ bụ iri na asatọ ọzọ ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ụmụaka n'ụlọ.
ỌR CH ILDM LEAKA .M .AKA
Igbahapụ ụmụaka ọrịa bụ ezumike nke na-enye onye ọrụ ohere ịnọ n'ọrụ nwa oge iji lekọta nwa ya na-arịa ọrịa. Dịka ndokwa nke edemede L1225-61 nke Usoro Ọrụ, ụfọdụ ọnọdụ na-achịkwa ezumike a, gụnyere eziokwu ahụ bụ na:
Nwa onye ahụ ga-arụrụ ọrụ ruru afọ 16,
onye ọrụ kwesịrị ịbụ nwa ahụ.
N'aka nke ọzọ, enyeghị ụmụaka ohere maka ogo ọrụ ha ma ọ bụ ọnọdụ ya n'etiti ụlọ ọrụ ahụ. Na nkenke, onye were ya n'ọrụ kwesiri inye ya onye ọrụ ọ bụla.
Nhapụ a na mgbakwunye na enweghị akwụ ụgwọ, nwere oge nke dịgasị iche dịka afọ na ọnụ ọgụgụ ụmụaka nke onye ọrụ. Ya mere, ọ dịgidere:
3 ụbọchị maka nwatakịrị na-erubeghị afọ 16,
5 ụbọchị maka nwatakịrị na-erubeghị afọ 1,
Daysbọchị 5 maka onye ọrụ na-elekọta ụmụaka 3 na-erubeghị afọ 16.
N'ụfọdụ, nkwekọrịta mkpokọta ahụ na-enye ogologo oge ezumike maka ụmụaka na-arịa ọrịa, nyocha.
Oge izu ike bụ ezumike a na-enye onye ọrụ ọ bụla ikike ịhapụ ịnọ ọrụ maka oge enyere aka, maka ọdịmma onwe onye. Enwere ike inye ya onye ọrụ nwere:
opekata mpe ọnwa 36 n'ime ụlọ ọrụ,
inwe ná nkezi afọ 6 nke ọkachamara ọrụ,
ndị na-eritebeghị uru na ọzụzụ ọzụzụ onwe onye, ​​hapụ maka ịtọlite ​​azụmaahịa ma ọ bụ nsogbu ezumike nká n'ime afọ isii gara aga n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Ogologo oge ezumike sabat dịkarịa iche n’agbata ọnwa isii na ọnwa iri na otu kacha. Na mgbakwunye, n'oge oge a, onye ọrụ ahụ anaghị enweta ụgwọ ọrụ.
AKW FORKWỌ maka ọnwụ
Usoro oru, site na edemede ya L3142-1, na-enye ma ọ bụrụ na ọnwụ nke onye otu ezinụlọ nke ndị ọrụ maka ezumike pụrụ iche a maara dịka ezumike ọnwụ. A na-enye ya ndị ọrụ niile na-enweghị ọnọdụ ọ bụla. Tụkwasị na nke ahụ, ogologo oge nke oge mmadụ nwụnahụrụ na-adabere n’ụdị nkekọ onye ọrụ ahụ na onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya mere:
3 ubochi nke onwu ma obu di ya ma obu nwunye ya.
3bọchị XNUMX maka ọnwụ nke nne, nna, ụmụnne nwoke ma ọ bụ ụmụnne nwanyị ma ọ bụ ọgọ (nna ma ọ bụ nne)
Daysbọchị ise maka ọnwụ dị egwu nwata.
Agreementsfọdụ nkwekọrịta mkpokọta ọnụ amụbaala ogologo oge nke ịhapụ iwu kwadoro. Iwu ohuru kwesiri igosiputa ikike inwere nwa nwuru anwu rue ubochi iri na ise.
ỌRES EGO NA-AGBARA MARA
Iwu ahụ nyere ndị ọrụ niile aka pụrụ iche a na-akpọ ezumike nne na nna. Oge ezumike a na-enye onye ọrụ ahụ ohere ịkwụsị ọrụ na-elekọta nwa ya onye ga-eweta ọnọdụ ahụike nke chọrọ nlekọta mgbochi na ọnụnọ ya.
Enyere ndị ọrụ, ndị ọrụ obodo, ndị ọrụ na-adịgide adịgide, ndị ọrụ na ndị na - azụ ọzụzụ oge ezumike nne na nna.
Na nkenke, a na-enye ya naanị mgbe nwatakịrị ahụ nwere nkwarụ, ọrịa siri ike ma ọ bụ nwee ihe ọghọm dị oke mkpa. Ọ dị nwute, anaghị akwụ ụgwọ ya ma nwee oge kachasị ogologo nke 310 ụbọchị.
Dika iwu 2019-1446 nke onwa iri-abuo n’ime onwa iri n’ aho n’aho 24, onye oru obula nwere ikike ikwusi oru ibanye n’onye enyemaka nke onye anyi huru n’anya nke gha enwe nnukwu onwu ma obu inwe nkwarụ. Oge ezumike a, a na-akpọ ezumike onye na-elekọta ọrụ, enweghị mmetụta na ọrụ onye ọrụ.
Iji rite uru na ya, onye ọrụ ahụ ga-enwerịrị ogo nke afọ 1 n'ime ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, onye ikwu ahụ a ga-enyere aka ga-ebi na France kpamkpam. Ọ nwere ike bụrụ di ma ọ bụ nwunye, nwanne, nwanne nna, nwanne nna, wdg. Ọ nwekwara ike bụrụ agadi onye nwere mmekọrịta chiri anya na onye ọrụ.
Ogologo oge ịhapụ ọrụ nlekọta bụ ọnwa atọ. Agbanyeghị, enwere ike imeghari ya.
Agreementsfọdụ nkwekọrịta mkpokọta na-enye ọnọdụ dị mma karịa, echefula ịjụ ase.
EZIN SLỌ EZIN .LỌ AKA
Iwu ahụ nyere ndị ọrụ onye ọ hụrụ n'anya ihe ọ bụla na-arịa ọrịa na-enweghị ọgwụgwọ ezumike pụrụ iche a na-akpọ ezumike mmekọrịta ezinụlọ. Site n'enyemaka a, onye ọrụ ahụ nwere ike belata ma ọ bụ kwụsịtụrụ ọrụ nwa oge iji lekọta onye ọ hụrụ n'anya nke ukwuu metụtara. Nke ikpeazu nwere ike ịbụ nwanne, nwanne, onye rịrọnụ, nwa, wdg.
Oge ezumike ezinụlọ dị n'otu bụ opekata mpe ọnwa 3 ma ọ kachasị ọnwa 6. Na mgbakwunye, n'oge oge ezumike, onye ọrụ ahụ nwere ike ịnweta ụgwọ nkwụghachi ụgwọ ụbọchị 21 (oge zuru ezu) ma ọ bụ ụbọchị iri anọ na anọ nke ụgwọ ọrụ (oge akụkụ).
AKW MKWARRAR ALA
Iwu ahụ nyere ndị ọrụ niile ụbọchị ezumike pụrụ iche maka alụmdi na nwunye, PACS ma ọ bụ alụmdi na nwunye nke otu n'ime ụmụ ha. Na mgbakwunye, dịka usoro nke isiokwu L3142-1 na ịgbaso Usoro Ọrụ, onye ọ bụla na-arụrụ ọrụ ọrụ iji nye ndị ọrụ na-arịọ arịrịọ ezumike alụmdi na nwunye ma ọ bụ PACS. Na mgbakwunye, onye ọrụ ahụ nwere ike iji ya ma ọ nọ na CDD, CDI, ọrụ ọhụụ ma ọ bụ ọrụ nwa oge.
Na nkenke, mgbe onye ọrụ lụrụ ma ọ bụ mechie akwụkwọ PACS, ọ na-erite uru site na ezumike nke ụbọchị 4. N'okwu banyere alụm di na nwunye nwa ya, onye ọrụ ahụ kwesiri ka ezumike 1 ụbọchị ọrụ.
AKW LEKWỌ ARBARRAR N’ANYA
Oge ezumike nne na nna bụ ụdị ezumike enyere ndị ọrụ mgbe amụrụ nwa ma ọ bụ kuchiri ya. Enyere ya onye ọrụ ọ bụla nwere afọ ole n’otu n’ime ụlọ ọrụ. A na-ekpekarị ikpe okenye dị ka ụbọchị ọmụmụ nke nwa ahụ ma ọ bụ na ọ bịarutere n'ụlọ nke nwa kuchiri.
Oge ezumike nne na nna zuru oke maka otu afọ, emegharia n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ihe nwatakịrị ahụ bụ ihe ọghọm ma ọ bụ nnukwu mmerụ ahụ, ọ ga-ekwe omume ịgbatị oge izu maka afọ ọzọ. Ma, a naghị akwụ ụgwọ ezumike ndị nne na nna.
GWARA AKW OFKWỌ NGW OFROL EGO N'ALAEZE EGO
Iwu ahụ nyere onye ọrụ ọ bụla nke na-eme mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ime obodo iji rite uru na ikike na nzere elekere. N'ihi ya, ikike maka itinye aka n'ọrụ ọchịchị obodo na-eme ka onye ọrụ ahụ nwee ike mezuo ọrụ ya dịka ọrụ ya (mpaghara a họpụtara, ọchịchị obodo ma ọ bụ ngalaba ya họpụtara).
Okwesiri iburu n'uche na n'etiti ihe ndi ozo, ekwuputaghi oge ebighi-ebi ihe ndia. Na mgbakwunye, ndị ọrụ niile nwere ikike ịhapụ onye ọrụ ọ bụla ahọpụtara oge dị mkpa iji rụọ ọrụ ha nke ọma.
Ihe Need Kwesịrị Knowmara Banyere Nkeonwe Eprel 25, 2020Tranquillus
gara agaIhe atụ nke akwụkwọ ozi iji rịọ maka nhapụ akwụghị ụgwọ.
-esonụJisie ozi igbe ozi gị nke ọma